China Abenzi bePvc yeVinyl yangaphandle yePlastiki yokuDibanisa kunye nabathengisi | Longjie
1. 100% IVinyl kuyo yonke
2. UV yelitha
4. I-ASTM eqinisekisiweyo kunye neminyaka engama-30 iwaranti
4. I-ASTM eqinisekisiweyo & iwaranti yeminyaka engama-30
Ukuhombisa ngeplastikhi: Amanqaku
Akukho kugcwaliswa kweenkuni, hayi imveliso edibeneyo yomthi;
Itekhnoloji yeeselfowuni ePVP;
Imbonakalo yendalo "yeenkozo zomthi";
Uxhathisa amabala, ukukrwela, ukungunda, ukufuma, umlilo kunye neentubi;
Akusekho kuphinda kujike, ukubola okanye ukuqhekeka;
Akukho ukubhola kwangaphambili okufunekayo kwizikhonkwane okanye kwizikrufu;
Inkqubo yokuvala kunye ne-groove yenza ufakelo lula;
Akukho zikhonkwane zingabukekiyo okanye izikrufu emhlabeni;
I-40-50% ilula kunezinye iindlela kodwa yomelele kwaye yomelele ngakumbi;
Indalo inobuhlobo kwaye ayinazo izinto eziyingozi.
Inkqubo yokuveliswa kwePlastiki yeVinyl yangaphandle yePlastiki
Inkampani i-Shanghai LongJie Plastics Co., Ltd. specialising kwimveliso PVC extrusion, IVinyl yokubumba, inaliti, kunye nenkqubo PS. Ngamava angaphezulu kweminyaka eli-10, u-Long Jie uphuhlise iimveliso zawo kuluhlu lwe-PVC, ukubiya, i-vinyl siding, ukuhonjiswa ngokudibeneyo kunye nezinye izinto zokwakha.
Inkampani yethu inenkqubo engqongqo yolawulo, ineqela eligqibeleleyo lolawulo, kunye namandla omeleleyo obuchwephesha, ukuphuhlisa izixhobo zokwakha eziluhlaza, ukhuseleko kwindalo esingqongileyo njengoxanduva lwayo, ukuseka inkqubo yolawulo lweshishini esemgangathweni kunye nesebenzayo, ngokwe "GB / T19001: 2008 (: 2008 idtISO9001) iimfuno zenkqubo yolawulo lomgangatho, "GB / T24001: 2004 (idtISO14001: 2004) iimfuno zenkqubo yolawulo lokusingqongileyo kunye nesikhokelo", "GB / T28000: 2001 inkqubo yolawulo lwezempilo nokhuseleko emsebenzini kunye nesikhokelo somsebenzisi" simisele inkqubo yolawulo yenkampani , kunye nokuqinisekisa ukuba inkampani isebenza ngokuthe rhoqo, ngokufanelekileyo nangokucwangcisiweyo, ukuqinisekisa ukuba imveliso iyahlangabezana neemfuno zeemfuno.
Iqela le-LongJie liza kusebenza kwi-R & D kwaye libonelele ngezisombululo kubuchule kubathengi bethu kwihlabathi liphela ngeemveliso zethu ezilungileyo kunye neenkonzo. Siqinisekile ukuba uLong Jie uya kuba liqabane lakho elilungileyo kwaye sijonge phambili ekusebenzisaneni nawe!
Inkampani i-Shanghai LongJie Plastics Co., Ltd.
Ukuba unayo nayiphi na ingxaki okanye uluvo, zive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi!
Inombolo yomnxeba: 021-34122835
Yongeza: # C, No. 1305, i-Hua Jiang Road, iMin ixhoma iSithili, iShanghai, China
Egqithileyo Ukukhanya kwendlela yelanga engenasici (2-Pack)
Okulandelayo: Iimilo ezininzi zithuka iPost Post
Ukukhanya kwendlela yelanga engenasici (2-Pack)